"ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमि भएको छैन" :सुशील भट्टराई (नायव कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम) | Kendrabindu Nepal Online News
“ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमि भएको छैन” :सुशील भट्टराई (नायव कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम)
७ चैत्र २०७६, शुक्रबार ११:४४
पछिल्लो समय चीनबाट विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ । अझ विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो भने छैन । विकास निर्माणदेखि व्यापार व्यावसायसम्म असर परेको छ । अहिले यसको प्रभावले बजारमा ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव तथा कालोबजारी हुन थालेको छ । तर, सरकारले कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिने बताइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईसँग केन्द्रबिन्दुका संवाददाता अनिस मिजारले कुराकानी गरेका छन् ।
१.कोरोनाको प्रभावले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमि भएकाले अभाव भएको हो ?
नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमि भएको छैन । अहिले नियमित रुपमा १ लाख सिलिण्डरका दरले नेपालमा ग्यास आयात भइरहेको छ । पट्रोलियम पदार्थ आयातमा पनि कुनै पनि समस्या र कमि भएको छैन । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रभावले आयात बन्द हुने हल्लाले सर्वसाधारणहरु सन्त्रासमा परेर आइरहेका बेलामा भरौं भनेर सबैले तेल भर्न थालेकाले पाँच दिनमा खपत हुने तेल एकै दिनमा खपत भएको छ । जसले गर्दा समस्या आएको हो । हामीले सहजरुपमा वितरण गरेकाले अहिले यो समस्या छैन ।
२.आयात भइरहँदा पनि ग्यास अभाव हुनुमा निगमको कमजोरी हो वा उद्योगीहरुको ?
यसमा निगम र उद्योगीको कमजोरी भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितीले निम्त्याएको समस्या हो । बजारमा ग्यासको माग बढ्नाले पनि यस्तो समस्या आएको हो । एउटा उपभोक्ताले ग्यास नपाउने भन्दै पाँचवटा सम्म सिलिण्डर भरेकाले पनि पीडित उपभोक्ताले ग्यास नपाएका हुन । उपभोक्ताले पनि आफू मात्रै बाचौं भन्ने सोच राखेर आतिएकाले यस्तो भएको हो । किनकी उपभोक्ताले पहिले भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा दुःख भोगेकाले पनि घरमा चुलो बाल्न कठिन हुने भन्दै आवश्यकता भन्दा बढी माग गरेकाले यस्तो भएको हो । अझ अर्को पक्ष पनि जुन हाम्रो व्यवसायीलाई ग्यास वितरणको प्रणालीमा पनि कसैलाई दिइ रहने कसैलाई सात दिनमा पनि नदिने प्रणालीले बिग्रिएको देखिन्छ । हामीले पनि उपभोक्तालाई बुझाउन नसक्दा यस्तो भएको हो । यती बेला यो नै दोषी हो भन्न मिल्दैन ।
३.कोरोना भाइरसको सावधानीको लागि तपाईंहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको यो अवस्था सरकारको मात्र नभएर हामी सबैको समस्या भएकाले पनि यसमा सजक भएर लाग्नु राम्रो हो । सरकारलाई हामी सबैले सहयोग गर्नु पर्छ । सरकारले विभिन्न निर्णय गरिसकेको छ । हामीले पनि अफिसमा सर्तकताका लागि मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र अफिसमा पनि पातलो रुपमा उपस्थित हुने गरेका छौं ।
४. सन्त्रासमा परेका उपभोक्तालाई के भन्नु हुन्छ ?
अहिले हामी सन्त्रासमा पर्ने भन्दा पनि सजकता अपनाउने बेला हो । यसको लागि हामी आफंैले सजक रहनु पर्छ । ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेकाले कुनै पनि कमि आउदैन । त्यसैले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात राख्ने होइन । अहिले गर्मीको मौसम पनि सुरु भएको छ । यसले गर्दा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात राख्दा कुनै आगलागी तथा अन्य दुर्घटना हुन सक्छ । यस्तो गर्नाले उपभोक्तालाई नै घाटा लाग्ने भएकाले उहाँहरुले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले आवश्यकता एक लिटरको थियो तर १० लिटरको माग गरेकाले यस्तो अभाव भएको हो । त्यसैले आवश्यकता भन्दा माथि मौज्दात गरेर कुनै फाइदा हुदैन भन्न चाहान्छु ।
५.कोरोना भाइरसको सावधानीमा सरकारले यो भन्दा अरु के गर्नु पर्ला ?
अहिले सरकारले जे गरिरहेको छ । यो पहिले नै गर्नु पर्ने थियो । केही ढिला भएको छ । यो हाम्रो देशमा मात्र देखिएको होइन । चीनमा महामारीका रुपमा फैलिएको प्रकोप अहिले नियन्त्रणमा आएको छ । त्यहाँको व्यवस्थापनलाई हेरेर पनि हाम्रोमा अझ व्यवस्थित गर्न सक्छौं । सरकारले उच्च स्तरिय समिति मात्र नभएर विभिन्न उपसमिति बनाएर अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रको उपसमिति बनाएर स्थानियस्तरमा समेत समिति बनाएर अगाडी बढ्नु जरुरी रहेको छ ।
Prevट्रायल दिने र सवारी लाइसेन्स आवेदन स्थगित
सुनको मूल्यमा सामान्य बृद्धिNext
‘संविधानको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक नियुक्ति हुनुपर्छ’ : कांग्रेस
आज दिनभरि भारी वर्षा, भोलिदेखि मौसममा सुधारको सम्भावना
गण्डक बाँध फुट्ने खतरा, नेपालका ४० गाउँ डुबानमा पर्न सक्ने
अफगानिस्तानमा १३ आतंकवादी मारिए
प्रदेश १ मा ११४ संक्रमित थपिए